75g Brush 12000.0 Ks
အားသွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီပါဝင်ပြီး ရေဖြင့်လွယ်ကူစွာ သန့်စင်ဆေးကြောနိုင်သော ဆီလီကွန်မျက်နှာသစ် Brush ဖြစ်ပါသည်။ စားသောက်နိုင်သောအဆင့် ဆီလီကွန်ကို အသုံးပြုပေးထားသောကြောင့် အရေပြားအတွက် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ စက်၏ တုန်ခါမှုစွမ်းအားဖြင့် အရေပြားကို ချွေးပေါက်အတွင်းပိုင်းအထိ လွယ်ကူစွာ သန့်စင်ပေးပြီး မကောင်းသော ဘက်တီးရီးယားများကိုပါ ဖယ်ရှားပေးသည်။ ရေစိုခံသည်။ နူးညံ့သောဆီလီကွန် Brush က အရေပြားပေါ်မှ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ဆားဝက်ခြံများ၊ ချွေးပေါက်ပိတ်ခြင်းများ၊ မိတ်ကပ်အကြွင်းအကျန်များကိုလည်း စင်ကြယ်စွာ သန့်စင်ပေးသည်။ တုန်ခါမှုပြင်းအား အဆင့်(၅)ဆင့် ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး အရေပြားအမျိုးအစားအလိုက် ပြင်းအားကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ မျက်နှာသန့်စင်ခြင်းအတွက် အထိရောက်ဆုံးနှင့် အနူးညံ့ဆုံး စွမ်းဆောင်ပေးသည်။
1 ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးမပြုမီ ဘက်ထရီအားပြည့်အောင်သွင်းပါ။ အားမသွင်းမီ အားသွင်းပေါက်နားတွင် ရေ (သို့မဟုတ်) အရည်မရှိအောင် သတိထားပါ။ အားသွင်းနေစဉ် မီးအင်္နရောင်လင်းနေမည်ဖြစ်ပြီး အကြာဆုံးအားသွင်းချိန်မှာ တစ်နာရီခွဲခန့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီအားနည်းနေချိန် စက်အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ အားသွင်းနေချိန်မှာလည်း အသုံးမပြုပါနှင့်။2သင့်မျင်နှာနှင့် ဆီလီကွန် Brush ရေဆွတ်ပါ။3မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာကို မျက်နှာပေါ် သို့မဟုတ် Brush ပေါ်တင်ပါ။4စက်ခလုတ်ဖွင့်ပြီး တုန်ခါမှု အတိုးအလျော့ကို အပေါင်းအနုတ်ခလုတ်များဖြင့် လိုအပ်သလိုပြောင်းပါ။ ပြီးရင် မျက်နှာအနှံ့ သန့်စင်ပေးလို့ရပါပြီ။5၃ မိနစ်ခန့် သန့်စင်ပြီးရင် မျက်နှာကို ရေဖြင့်ဆေးကြောလိုက်ရင် သန့်စင်ဝင်းပသောအရေပြားကို ရရှိတာကိုတွေ့ရမှာပါ။6မျက်နှာကို မျက်နှာသုတ်ပုဝါဖြင့် ရေခြောက်အောင်ပုတ်ပုတ်ပေးပြီး Skin Care လိမ်းပါ။ စက်ကိုလည်း ရေခြောက်အောင် သုတ်ပြီး Skin Care လိမ်းထားသောမျက်နှာအရေပြားကို စက်ရဲ့ Brush မရှိသောဘက်ဖြင့် စက်ဖွင့်ပြီး တုန်ခါမှုဖြင့် နှိပ်နှယ်ပေးလို့ရပါတယ်။
1 စက်ကို မျက်လုံးတစ်ဝိုက်မှာအသုံးမပြုပါနှင့်။2ရွှံ့ပါဝင်သော သန့်စင်ဆပ်ပြာများ၊ ဆီလီကွန်ပျော်ဝင်နိုင်သော သန့်စင်ဆပ်ပြာများ၊ အစိုင်အခဲပါဝင်သော မျက်နှာသစ် Scrub များနှင့် တွဲဖက် အသုံးမပြုသင့်ပါ။ စက်၏နူးညံ့သောဆီလီကွန် Brush များကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။3တုန်ခါမှုအားပြင်းထန်လွန်းခြင်း၊ လျင်မြန်စွာရွေ့လျားသန့်စင်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရ။4မျက်နှာ၏ မည်သည့်ဧရိယာကိုမဆို စက္ကန့် ၂၀ ထက် ပိုကြာကြာမသန့်စင်ရ။5စက်ကို အသုံးပြုချိန်မှာ အရေပြားပေါ်တွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော တုံံ့ပြန်မှုများဖြစ်ပေါ်လာပါက ဆရာဝန်နဲ့ ပြသတိုင်ပင်ပါ။6အားသွင်းနေစဉ် အသုံးမပြုပါနှင့်။
1 စက်ကို အသုံးပြုပြီးတုင်း ဆပ်ပြာများ မကျန်နေအောင် ရေဖြင့်ဆေးကြောပြီး ခြောက်သွေ့စွာ ထားသိုပါ။ စက်ကို အရက်ပျံ၊ လောင်စာဆီ၊ စားသုံးဆီစတာတွေနဲ့ သန့်စင်ပေးလို့မရပါ။ ဆီလီကွန် Brush များပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။2စက်ကို စိုထိုင်းသောနေရာတွင် မသိမ်းထားပါနှင့်။ ပန်းကန်ဆေးစက်၊ မိုက်ခရိုဝေ့(ဖ်) အာဗန်ထဲတွင် ထည့်သွင်းပိုးသတ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။3ရေနှင့်ကလွဲ၍ အခြားမည်သည့်အရာနှင့်မှ သန့်စင်ဆေးကြောခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။4စက်ကို ၃လနှင့်အထက် အသုံးမပြုဘဲထားမည်ဆိုပါက ဘက်ထရီအပြည့်သွင်းပြီးမှ သိမ်းဆည်းထားပါ။ ဒါမှ ဘက်ထရီပျက်စီးခြင်းမဖြစ်ပေါ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
1 စားသုံးနိုင်သောအဆင့် ဆီလီကွန်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။2ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးအသုံးပြုနိုင်ပြီး မကောင်းသောဘက်တီးရီးယားများကိုပဲ ဖယ်ရှားပေးသည်။3အရေပြားမတည်ခြင်း လုံးဝမဖြစ်ပေါ်ပါ။4တုန်ခါမှုဖြင့် သန့်စင်ပေးခြင်းကြောင့် အရေပြားအတွင်းဆုံး Layer အထိ ထိရောက်စွာ သန့်စင်ပေးပြီး ချွေးပေါက်ပိတ်ခြင်းကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးသည်။5နူးညံ့သော ဆီလီကွန် Brush က အရေပြားကို ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိဘဲ ထိရောက်စွာ သန့်စင်ပေးသည်။6အရေပြားအလိုက် တုန်ခါမှုပြင်းအား အဆင့် ၅ ဆင့် ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်သည်။
💙 Nano Brush ဖြင့် Smart ကျကျ မျက်နှာသန့်စင်ပါ 💙 တုန်ခါမှုဖြင့် အရေပြားအတွင်းဆုံး Layer အထိ ထိထိရောက်ရောက် သန့်စင်ပေးပြီး ချွေးပေါက်ပိတ်ခြင်းကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးတဲ့အပြင် ဆားဝက်ခြံများ၊ မိတ်ကပ်အကြွေင်းအကျန်များကိုလည်း စင်ကြယ်စွာ သန့်စင်ပေးပါတယ်။ ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ မျက်နှာအသားအရေကို ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိဘဲ Smart ကျကျ ထိရောက်စွာ သန့်စင်ပေးနိုင်လို့ အခုပဲ ပြေးဝယ်လိုက်တော့နော် Nano Brush တစ်ခု ၁၂,၀၀၀ ကျပ်
ပြိုတော့မိုးလို ညိုညစ်ညစ် မျက်နှာကြီးနဲ့ Valentine Day မှာ ချစ်သူလေးနဲ့ ဘယ်လို Date ရမလဲ စဉ်းစားရင်း စိတ်ညစ်နေလား 🤔 ချစ်သူလေးနဲ့ Date ရင် အဆင်ပြေနေစေဖို့ Nano Brush နဲ့ Nano Spray လေး သုံးပေးနော် 🥰 Nano Brush နဲ့ မျက်နှာသစ်ပေးမယ်ဆိုရင် အရေပြား ချွေးပေါက်အတွင်းပိုင်းအထိ သန့်စင်ပေးပြီး မကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားများကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ဆားဝက်ခြံ၊ ချွေးပေါက်ပိတ်တာတွေကို ဖယ်ရှားပေးလို့ မျက်နှာလေး ကြည်လင်လာစေပါတယ်။ Nano Brush နဲ့ မျက်နှာသစ်ပြီးရင်တော့ ရေဓာတ်ပြည့်ဝဖို့ Nano Spray လေးကို သုံးပေးပါ။ အရေပြားအတွင်းပိုင်းထိ ထိရောက်စွာ ရေဓါတ်ဖြည့်တင်းပေးလို့ အသားအရေလေး ကျန်းမာစိုပြေစေပါတယ်။ ဒါဆို ချစ်သူလေးရဲ့ အချစ်တွေ တိုးလာလိမ့်မယ်နော် Nano Brush တစ်ခု ၁၂,၀၀၀ ကျပ် Nano Meter Spray Water တစ်ခု ၁၇,၀၀၀ ကျပ်
အဆင့် (၃) ဆင့်ဖြင့် အညစ်အကြေးနဲ့ ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ ? အခြေခံအကျဆုံး Skin Care အဆင့်ဖြစ်တဲ့ Cleansing ကို နေ့စဉ် သေချာပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ☺️ Make up မလိမ်းတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် Make up ပါးပါးပဲ လိမ်းလိမ်း ထူထူပဲ လိမ်းလိမ်း ဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် မမြင်နိုင်တဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေ မျက်နှာမှာ ကပ်နေတတ်ပါတယ်။ ? ဆဲလ်သေတွေ မမြင်နိုင်တဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို တစ်ခါတည်း အရေးပြားအတွင်းဆုံးအလွှာထိ သန့်စင်ပေးမယ် ဘယ်လို အသားအရေအမျိုးအစားမဆို သုံးလို့ရတဲ့ Product လေးတွေက Ketchup Remover , Nano Brush, New Skiin Foam Cleanser နဲ့ New Skiin Toner ပါ။ Cleansing လုပ်ရမယ့် အဆင့်လေးတွေ ပြောပြသွားပေးမယ်နော် ? အဆင့် (၁) Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue နဲ့ မျက်နှာပေါ်က အညစ်အကြေးတွေကို အရင်ဆုံးဖယ်ရှားပေးပါ။ Tissue မှာပါဝင်တဲ့ နူးညံ့တဲ့ အမြှုပ်လေးတွေက ဖျက်ရခက်တဲ့ ရေစိုခံမိတ်ကပ်တွေကို ဖိပြီး ပွတ်ဆွဲစရာမလိုပဲ အသာအယာ ပွတ်သပ်ပေးရုံနဲ့ လွယ်ကူစွာ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ ? အဆင့် (၂) Nano Brush ကိုအသုံးပြုပြီး New Skiin Foam Cleanser နဲ့ မျက်နှာသစ်ပါ။ Nano Brush က တုန်ခါမှုနဲ့ သန့်စင်ပေးတာကြောင့် အရေပြားအတွင်းဆုံး Layer အထိ ထိရောက်စွာ သန့်စင်ပေးပြီး ချွေးပေါက်ပိတ်ခြင်းကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ New Skiin မျက်နှာသစ်ရဲ့ အရောင် (၃) မျိုးက ကိုယ့်အသားအရေအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးခြယ်လို့ရပါတယ်။ အဝါရောင် Vitamin C က ပုံမှန်အသားအရေရှိသူ တင်းတိပ်မှဲ့ခြောက်ပျောက်ချင်သူ၊ အသားအရောင် ညီညာလိုသူ၊ အသားဖြူစင်ဝင်းပချင်သူအတွက်ပါ။ အပြာရောင် Collagen က အသားအရေခြောက်သွေ့သူ၊ အစိုဓါတ်ထိန်းသိမ်းလိုသူ၊ အသားအရေတင်းရင်းလိုသူအတွက်ပါ။ ခရမ်းရောင် Salicylic Acid က အဆီပြန်သူ၊ ဝက်ခြံထွက်သူ၊ ဆားဝက်ခြံနဲ့ အဆီဖုပျောက်ကင်းလိုသူအတွက်ပါ။ ? အဆင့် (၃) မျက်နှာသစ်ပြီးရင်ဆိုရင်တော့ New Skiin Brightening Exfoliation Toner ကို Cotton Pad နဲ့ သင့်တော်တဲ့ ပမာဏထည့်ပြီး မျက်နှာနှင့် လည်ပင်းအနှံ့ အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ အရေပြားပေါ် အားပြင်းပြင်း ပွတ်ဆွဲခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။ Low pH, Alcohol free ဖြစ်လို့ အသားအရေခြောက်သွေ့ပြီး ပျက်စီးမှာကို စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ အရေးပြားဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး Skin Care များရဲ့ စိမ့်ဝင်မှုအားကို ကောင်းမွန်စေပြီး Skin Care များရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်း အပြည့်အဝ ရရှိစေပါတယ်။ ဒီ အဆင့် (၃) ဆင့်ကို နေ့စဉ်ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ဆဲလ်သေတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ချွေးပေါက်ပိတ်ခြင်း အသားအရေကြမ်းတမ်းခြင်း နဲ့ ဝက်ခြံ၊ ဆားဝက်ခြံ နဲ့ အဆီဖုတွေရဲ့ ပြဿနာကနေ ကင်းဝေးပြီး အသားအရေ ကြည်လင်ဖြူစင်ဝင်းပ လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 30 Sheets တစ်ထုပ် ၅၀၀၀ ကျပ် ? Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 100 Sheets တစ်ထုပ် ၁၂၀၀၀ ကျပ် ? Nano Brush တစ်ခု ၁၂,၀၀၀ ကျပ် ? New Skiin Foam Cleanser (150g) တစ်ဗူး - ၁၀,၀၀၀ ကျပ် ? New Skiin Brightening Exfoliation Toner (150 ml) တစ်ဘူး - ၁၉,၀၀၀ ကျပ်
မျက်နှာအသားအရေကို ထိခိုက်ပျက်စီးမှု မရှိစေတဲ့ Nano Brush ? Nano Brush ကို နူးညံ့တဲ့ ဆီလီကွန်နဲ့ ပြုလုပ်ထားလို့ အရေပြားကို ထိခိုက်ပျက်စီးမှု မရှိဘဲ ထိထိရောက်ရောက် သန့်စင်ပေးပါတယ်။ အရေပြားအတွင်းဆုံးအထိ သန့်စင်ပေးပြီး ဆားဝက်ခြံ၊ ချွေးပေါက်ပိတ်ခြင်း၊ မိတ်ကပ်အကြွင်းအကျန်များကိုလည်း စင်ကြယ်စွာသန့်စင် ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ နေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး အရေပြားအတွက် အန္တရာယ်ကင်းရှားစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Nano Brush တစ်ခု ၁၂,၀၀၀ ကျပ်
? ခေတ်မီသူတိုင်း Nano Brush ကိုသုံးတယ်နော် ? Nano Brush ကို ပုံမှန် မျက်နှာသစ်ဖို့အတွက်ပဲ အသုံးပြုတယ်လို့ ထင်ရင် မှားသွားမှာပေါ့ ? နူးညံ့တဲ့ ဆီလီကွန် Brush လေးတွေက U area မျက်နှာပြင်ကို စင်ကြယ်စွာသန့်စင်ပေးပြီးတော့ Brush ရဲ့ ထိပ်ပိုင်းမှ ဆီလီကွန်လေးတွေက T area မှာရှိတဲ့ ဆားဝက်ခြံတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ စက်ရဲ့ Brush မရှိတဲ့ဘက်ကိုသုံးပြီး Skin Care လိမ်းတဲ့အခါမှာ နှိပ်နယ်ပေးလို့လဲရပါသေးတယ်။ အရေပြားအလိုက် တုန်ခါမှုပြင်းအား အဆင့် (၅) ဆင့် ပြောင်းလဲနိုင်လို့ အသားအရေအမျိုးအစားအားလုံးအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ နေ့တိုင်းလဲ သုံးလို့ရတယ်နော် Nano Brush တစ်ခု ၁၂,၀၀၀ ကျပ်
? ဆားဝက်ခြံများကို Nano Brush ဖြင့် သန့်စင်ပါ ? Nano Brush ကို စားသုံးနိုင်သောအဆင့် ဆီလီကွန်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ နူးညံ့သော ဆီလီကွန် Brush က တုန်ခါမှုဖြင့် သန့်စင်ပေးခြင်းကြောင့် အရေပြားပေါ်မှ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ဆားဝက်ခြံများ၊ ချွေးပေါက်ပိတ်ခြင်းများ၊ မိတ်ကပ်အကြွင်းအကျန်များကိုလည်း အရေပြားအတွင်းဆုံး Layer အထိ ထိရောက်စွာ သန့်စင်ပေးပါတယ်။ Nano Brush တစ်ခု ၁၂,၀၀၀ ကျပ်
Nano Brush ကို အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် ဒီလို အချက်လေးတွေ သတိထားပေးပါနော် ? ? စက်ကို မျက်လုံးတစ်ဝိုက်မှာ အသုံးမပြုပါနှင့်။ ? ရွံ့ပါဝင်သော သန့်စင်ဆပ်ပြာများ၊ ဆီလီကွန် ပျော်ဝင်နိုင်သော သန့်စင်ဆပ်ပြာများ၊ အစိုင်အခဲ ပါဝင်သော မျက်နှာသစ် Scrub များနှင့် တွဲဖက် အသုံးမပြုသင့်ပါ။ စက်၏ နူးညံ့သော ဆီလီကွန် Brush များကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ ? တုန်ခါမှုအား ပြင်းထန်လွန်းခြင်း၊ လျင်မြန်စွာ ရွေ့လျားသန့်စင်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရ။ ? မျက်နှာ၏ မည်သည့်ဧရိယာကိုမဆို စက္ကန့် ၂၀ ထက်ပိုကြာကြာ မသန့်စင်ရ။ ? စက်ကို အသုံးပြုချိန်မှာ အရေပြားပေါ်တွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော တုံ့ပြန်မှုများဖြစ်ပေါ်လာပါက ဆရာဝန်နဲ့ ပြသတိုင်ပင်ပါ။ ? အားသွင်းနေစဉ် အသုံးမပြုပါနှင့်။ Nano Brush တစ်ခု ၁၂,၀၀၀ ကျပ်
ညစ်နေတာတွေ ဖယ်ရှားပစ်မယ် ? သာမန်မျက်နှာသစ်ကို လက်နဲ့ အသုံးပြုရုံနဲ့ ဆဲလ်သေတွေ မိတ်ကပ်အကြွင်းအကျန်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး.... ? Nano Brush နဲ့ New Skiin Foam Cleanser ကို အသုံးပြုပြီး မျက်နှာပေါ်မှ ချွေးပေါက်အတွင်းပိုင်းအထိ အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို သန့်စင်ပြီးရင်တော့ New Skiin Brightening Exfoliation Toner ကို Cotton Pad ဖြင့် သင့်တော်တဲ့ ပမာဏထည့်ပြီး မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းအနှံ့ ချေးချွတ်ပေးပြီး ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ Toner ကိုတော့ ညဘက်ပဲ သုံးပေးနော် ဒီလိုဆိုရင် အညစ်အကြေးတွေ သေချာသန့်စင်ပြီး ဝင်းပဖြူစင်နဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ Nano Brush တစ်ခု ၁၂,၀၀၀ ကျပ် New Skiin Foam Cleanser (150g) တစ်ဗူး - ၉,၅၀၀ ကျပ် New Skiin Brightening Exfoliation Toner (150 ml) တစ်ဘူး - ၁၈,၀၀၀ ကျပ်
Skin Care လိမ်းပြီး Nano Brush နဲ့ နှိပ်နယ်ပေးနိုင်ပါတယ် ? Nano Brush က မျက်နှာသန့်စင်ဖို့အတွက်ပဲ မဟုတ်ဘူးနော် Nano Brush နဲ့ မျက်နှာသစ်ပြီးရင်တော့ မျက်နှာကို မျက်နှာသုပ်ပဝါနဲ့ ရေခြောက်အောင် ပုတ်ပုတ်ပေးပြီး New Skiin Cream လေးလိမ်းပါ။ Nano Brush ကိုလည်း ရေခြောက်အောင်သုတ်ပြီး New Skiin Cream လိမ်းထားတဲ့ မျက်နှာ အရေပြားကို စက်ရဲ့ Brush မရှိတဲ့ဘက်နဲ့ စက်ဖွင့်ပြီး တုန်ခါမှုဖြင့် နှိပ်နယ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် မျက်နှာလေး တင်းရင်းလှပလာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Nano Brush တစ်ခု ၁၂,၀၀၀ ကျပ်
ပြိုတော့မယ့် မိုးလို ညိုညစ်ညစ် မျက်နှာအသားအရေကြောင့် စိတ်ညစ်နေပြီလား ❓ မျက်နှာရဲ့ အရေပြားမှာ ဆဲလ်အသေများဖုံးအုပ်နေပြီဆိုရင် အသားအရေကြမ်းတမ်းလာပြီး အသားအ‌ရေ မညီမညာနဲ့ ဝင်းပမှုလဲမရှိတော့ပါဘူး။ ? ဆဲလ်သေများဖုံးအုပ်နေတာကြောင့် မျက်နှာအသားအရေက Skin Care စုပ်ယူနိုင်မှု အားနည်းပါတယ်။ ? ဒါ့ကြောင့် မျက်နှာကို Nano Brush + New Skiin Foam Cleanser + New Skiin Brightening Exfoliation Toner တို့နဲ့ သေချာသန့်စင်ပေးပြီး ချေးချွတ်ပေးမယ်ဆိုရင် ဘယ်လို အသားအရေ ပြဿနာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူးနော် ? Nano Brush က အရေပြား ချွေးပေါက် အတွင်းပိုင်းအထိ လွယ်လွယ်ကူကူ အညစ်အကြေးများကို ထိရောက်စွာ သန့်စင်ပေးပြီး မကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားများ၊ ဆဲလ်သေများ၊ ဆားဝက်ခြံများ၊ ချွေးပေါက်ပိတ်ခြင်းများ၊ မိတ်ကပ်အကြွင်းအကျန်များကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ New Skiin Foam Cleanser မှာ Vitamin C (အမဲစက်ရှိသူများအတွက်) ၊ Collagen (အသားအရေခြောက်သူများအတွက်) ၊ Salicylic Acid (ဝက်ခြံရှိသူများအတွက်) ဆိုပြီး (၃) မျိုးရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အသားအရေနဲ့ သင့်တော်တဲ့ အမျိုးအစားကို ရွေးခြယ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ New Skiin Foam ကို Nano Brush နဲ့ မျက်နှာသစ်ပြီးရင်တော့ New Skiin Toner ကို အသုံးပြုပြီး အရေပြားကို ပုံမှန်ချွေးချွတ်ပေးမယ်ဆိုရင် အသားအရေခြောက်သွေ့မှုကို ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး အသုံးပြုတဲ့ Skin Care များရဲ့ စိမ့်ဝင်မှုအားကောင်းမွန်စေတာကြောင့် Skin Care များရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်း အပြည့်အဝရရှိစေပါတယ်။ ညဘက် New Skiin Toner ကို Cotton pad ပေါ် သင့်တော်တဲ့ ပမာဏထည့်ပြီး မျက်နှာနှင့် လည်ပင်းအနှံ့ကို အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးလေးတွေ သေချာသန့်စင်ပေးမယ်ဆိုရင် မျက်နှာအသားအရေ တင်းရင်းနုပျို ဖြူစင်ဝင်းပလာပြီး ကျန်းမာတဲ့ အသားအရေ ပိုင်ဆိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Sensitive Skin များလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Nano Brush တစ်ခု ၁၂,၀၀၀ ကျပ် New Skiin Foam Cleanser (150g) တစ်ဗူး - ၉,၅၀၀ ကျပ် New Skiin Brightening Exfoliation Toner (150 ml) တစ်ဘူး - ၁၈,၀၀၀ ကျပ်